स्वास्थ्य/शिक्षा – News Online
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
काठमाडौं, १७ मंसिर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शुक्रबार कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार नजिता प्रकाशित गरिएको हो । सार्वजनिक नतिजाअनुसार सात हजार ३६ परीक्षार्थीले ‘ए प्लस’, ४८ हजार २३९ परीक्षार्थीले ‘ए’, ७० हजार एक जना परीक्षार्थीले ‘बी प्लस’, ९९ हजार ५३७ परीक्षार्थीले ‘बी’, ७५ हजार ८८ परीक्षार्थीले… Continue reading कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशित, यसरी हेर्न सकिन्छ नतिजा
कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी,हेरौ कार्य तालिका
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । गत ३० भदौदेखि ८ असोजसम्म सञ्चालन भएको परीक्षाको नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्ड स्रोतका अनुसार बिहीबार बसेको बैठकमा नतिजाको डेमो तथा एक्पेल भए/नभएको हेरिएको थियो । बिहीबारको बोर्ड बैठकमा त्रुटि नदेखिएपछि शुक्रबार नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । शुक्रबार… Continue reading कक्षा १२ को नतिजा आज सार्वजनिक गर्ने तयारी,हेरौ कार्य तालिका
तपाई हामी अधिकांशलाई दिनहुँ कम्मरमा बेल्ट बाँध्ने बानी परिसकेको छ । तर,यो बानीले समस्या पनि सिर्जना गर्न सक्दछ । जब हामी दिनहुँ टाइट बेल्ट बाँध्ने गर्दछौ, त्यसले अनेक समस्या निम्ताउन सक्छ । टाइट बेल्ट बाँधेका कारण दिनभर पेटको नर्भ्स दबिने गर्दछ । यस्तो लामो समय गर्दा पेल्भिक रिजनबाट निस्कने आर्टरी, भेन्स, मसल्स र आन्द्रामा दबाव… Continue reading टाइट बेल्ट बाँध्ने बानी छ ? यो लेख अवश्य पढ्नुस
लसुन सेवन गर्ने पुरुषप्रति महिला किन आकर्षित हुन्छन् ? यस्तो रहेछ कारण
एउटा अध्ययनका अनुसार जुन पुरुषले लसुन खाने गरेका छन् उनीहरुप्रति महिलाको आकर्षण बढी हुने गर्दछ । अध्ययनका अनुसार महिलाहरुलाई लसुन सेवन गर्ने पुरुष पसिनाबाट आउने गन्ध मन पर्ने गर्दछ । वैज्ञानिकहरुका अनुसार महिलाहरु केही यसप्रकारले विकसित भएका छन् कि अब उनीहरुलाई लसुन सेवन गर्न मन परिरहेको छ । लसुनमा एन्टिबायोटिक, एन्टीभायरल र एन्टीफंगलको गुण हुने… Continue reading लसुन सेवन गर्ने पुरुषप्रति महिला किन आकर्षित हुन्छन् ? यस्तो रहेछ कारण
भाइटीकामा दाजुभाइलाई दिदीबहिनीहरुले दिने ‘भाग’ को अभिन्न अंग हो, भाइमसला । यसमा काजु, किसमिस, ओखर, छोगडा, नरिवललगायत ‘ड्राइ फ्रुट्स’ हुन्छन् । ड्राइ फ्रुट्स सन्तुलित आहारको एक अंश हो । यसलाई सकेसम्म नियमित सेवन गर्नुपर्छ । तर, अक्सर हामी पाएपछि धेरै खाइदिन्छौं । भनिन्छ नि, धेरै खायो भने औषधी पनि विष हुन्छ । ड्राइ फ्रुट्सको अत्यधिक… Continue reading तिहारमा दिदीबहिनीले दिने भाइ मसलाका छन् यस्ता फाईदा जानि राख्नुस
कात्तिक ७ काठमाडौं । देशभर आइतबार र सोमबार ६ महिनादेखि पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइँदै छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार र सोमबार देशभरका ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ‘ए’ क्याप्सुल र १२ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधिसमेत खुवाइनेछ । सरकारले देशभरका प्रत्येक वडामा तोकिएका खोप केन्द्रमा… Continue reading देशभरका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ‘ए’ र जुकाको औषधि खुवाइँदै
सन्जिप तिम्सिना । हामिले धेरै खानेकुराहरु एकैसाथ मिसाएर खाने गर्छौ। किनकी कुनै चिजहरु यसका साथ मिसाएर खाँदा स्वादिष्ट हुन्छ। आज हामी तपाईंलाई खाने-पिउने यस्ता केहि चीजहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौं जुन सँगै खानु हुँदैन। जस्तो कि, तपाईंले दहीसँग संग कहिल्यै पनि खट्टा फल खानु हुँदैन। यी चिजसँगै खादा पच्दैन जसको कारण पेट गडबड हुन्छ :- जस्तै… Continue reading अण्डा खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् यी चिज, नत्र देखिनसक्छ यस्तो समस्या
कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु,३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी सहभागि
भदौ ३० काठमाडौं । कोरोना भाइरस महामारीका कारण करिब ४ महिना पछि धकेलिएको कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा आज बुधबारबाट सञ्चालन हुँदैछ । पहिलो दिन आज अनिवार्य अंग्रेजीको परीक्षा हुँदैछ । परीक्षा बिहान ११ देखि दिउँसो २ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । ८ असोजसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा ३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी छन् । परीक्षामा विद्यार्थीलाई होम सेन्टर… Continue reading कक्षा १२ को परीक्षा आजबाट सुरु,३ लाख ७४ हजार विद्यार्थी सहभागि
Categorized as Headline, समाचार, स्वास्थ्य/शिक्षा
काठमाडौँ । ह्वाइट डिस्चार्ज आम महिलामा हुने समस्या हो। यसले महिला स्वास्थ्यमा ठूलो असर पनि गर्छ। ह्वाइट डिस्चार्जलाई सेतो पानी वा लिकोरिया पनि भन्ने गरिन्छ।महिनावारीको अघिपछि यस्तो पानी बग्नु धेरैको समस्या हो। कतिपय अवस्थामा यो अधिक मात्रामा हुने गर्छ। यसले अन्य रोगको संकेत पनि गर्नेगर्छ । सेतो पानी बग्ने कारण – आफ्नो संवेदनशील अंगको ठिक… Continue reading यस कारण देखिन्छ महिलामा सेतो पानी बग्ने समस्या, यसरी पाउन सकिन्छ छुटकारा